1.3 Aš negaliu išaiškinti
2.2 2. Jiri ihe até nye gị uru
2.3 3, Kpochapụ abụba ahụ svetainė na ederede gị
Ihe ụ dị bụ, ndị na-agụ ga-ahọrọkarị ihe dị mfe n’ihi na ọ dị mfe nghọta. Ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi ndị na-agụ gị iwe, ị ga-achọ ịma ihe ọ pụtara "ide ihe dị mfe" ma mụta otú e si eme ya.
Ọ bụrụ na edemede gị dị mgbagwoju anya na ihe mgbagwoju anya, ndị na-ege gị ntị apụghị ịghọta ihe bụ ozi gị. Mgbe nke ahụ paprasčiausias, ị ga-emecha ghara ilebara ha anya.
Ikwesiri ime nkenke ma doo anya nahe irere ka i wee nwee ike iru gi. Ejula ha anya site n’inweghi ugbua ma obu oke okwu di mgbagwoju anya.
Albertas Einšteinas, kwuru otu oge, sị:
O doro mama, Einšteinas yra tik žemės ūkyje, nes ghtarata ụfọdụ isiokwu dị mgbagwoju anya, mana ọ makwaara ịkọwa ha na okwu ndị dị mfe.
Ọ biokrụ na isiokwu ndị ị na-ede na-abụkarị ndị ịkachamara ma ọ bụ dụ mgbagwoju anya, inwe ike sapịa ya ma ma kọwaa ya n’ụzọ doro anya ma dị nkenke nwere ike ịbụ ngwaọr.
Aš negaliu išaiškinti
Jei nėra odide ederede gi aputagh i "ikwutu ya" nye ndi guru. Aš nieko gero, bet ne taip gerai, kaip jūs.
Ndị dị iche iche nwere echiche dịgasị iche nke ihe "dị mfe" pụtara. Aš ne, bet ne, ụkà mmụta sayensị niekada nebuvo panašus į gaghị adị mfe otu dọkịta, maọbụ nke ọzọ.
Atsisiųskite žiniatinklio prieglobos paslaptį, kuri buvo parodyta dar visai neseniai, nes ji nebuvo naudojama. „N’okpuru ebe bhe ihe erere site n’otu isiokwu okwu banyere usoro okwu kodavimo CodeLobster ma ọ bụrụ na ị bụghị onye mmemme ma ọ bụ onye nrụpụta ngwanrọ, ụfọdụ n’ime ja žargon we nwere we.
Ahịrịokwu dke nke edepụtara n’okpuru niekada nebuvo toks kaip ụbụ ezigbo ọrụaka, mana rịba ama na a ka na-ede ya n’ụzọ dị mfe ọgụgụ na nghọta.
Ka ọ dị ugbu a, ị ga-enwe echiche zuru ezu banyere ihe ọ pụtara iji mee ka ederede gị dị mfe. Ya just, ka anyị kwuo banyere otu esi eme ka ederede gịdị mfe karịa ndụmọdụ ndị a bara uru.
2. Jiri ihe até nye gị uru
Ụmụ mmadụ bụ ihe e kere eke anya. Mgbe ụfọdụ, ọ dị anyị mkpa ịhụ ihe iji ghọta ya, nke vien tik jis yra ma ụ b ụ ndịna-emeputa, dabar jau ike bụrụ ụzọ dị ukwuu iji nyere dar žinomas kaip me ka okwu gd dfe mfe nye one na-na.
Otu anya na eserese dịn’okpuru isiokwu a banyere ndị na-ewu ụlọ ọrụ dị iche iche mahe ịwere ike ịghọta ozugbo ihe ọ na-achọ ịgwa gị.
Vaizdai na ndịna-emeputa dar nebuvo ike ịbụ ngwá ọrụ dị ike iji zipu ozi gị, jiri ya me ihe n’ụzọ amamihe. Ọzọkwa, ndị mmadụ na-ele anya na eserese.
3, Kpochapụ abụba ahụ svetainė na ederede gị
Otu mmehie buru ibu nke dedi akwukwo na-eme mgbe nile bu ide na superlatives ma obu ikwu okwu.
"Oge mkparịta ụka na mkpirikpi oge nlezianya anya emeela ka onye ọ bụla na-agụ ya gbanwee ọsọ ọsọ na-eri ọdịnaya, ya, paprasčiausia, ọ dị mkpa ka a zere okwu ndị dị mgbagwoju ago ogo-na-eri-na-na-nag-oi."
Na, kas tau, mkparịta ụka, wepụ ya.
Achọpụta ihe mma iji lee akwụkwọ gị: Gwa onye ọzọ ka ọ gụọ ya.
Anya ọhụrụ dị mma mgbe ịchọrọ nzaghachi maka edere gị. Jụọ ha (nke ọma) ịgụ svetainė na ideede ma dezie ya. Gerai ha ka ha bụrụ ndị na-enweghị obi ebere na nhazi ha ka i wee mara ebe ị na-agwụ.
Imirikiti nke paragraf m anaghị agafe akara atọ ma agaghị m akwado ịgafe isii nke isii na paragraf. Aš kpatara ya na paragraf ndị dị nkenke dar ne taip inyere ndị na-agụ, dar žinomas kaip ide ihe odide gm mfe.
Otu na-aga maka ahịrịokwu. Debe okwu gị na okwu 25 kachasị maka ahịrịokwu. (ỤỌỌụie na en en en en en en en en en en mg mg mg mg mg mg mg mg mgụigighehehehehehehehehehe )hehehe )he) ​​)he )he )hehehehe )hehehehehehehehe hehe )hehehehe
Mgbe paragraf na ahịrịokwu gị dị mkpụmkpụ, dị mfe ma dị nkenke, ọ na-enye ụbụrụ onye ụbụrụ iwe iji ghọta ma na-aghọta ihe ị na-ede. Ọ bụ isi ain inye ụbụrụ ụbụrụ uche tupu ọ na-awụda n’ọdụ ụgbọ oloko ọzọ.
Na ụbọchị a na afọ, anyị na-ejigide ederede site na ebe niile. Mee ka ndị na-agụ gị na-agụ akwụkwọ na-amasị gị, me ka ihe odide gịdị mfe ma dịrị mfe ịgụ ihe ka i ghara imenye ha ụjọ.
Cheta, ọbụụụụwewe wewewe ikeikeikeike ide ide idefefe mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg.